Nuuriya: Guurkaygii waxaa ninkayga lagula taliyay "ha guursan waa Naafo" - BBC News Somali
Image caption Nuuriya Macalin Cali waa gabar naafo ah
Nuuriya Macallim Cali oo Soomaali ah waxay ka sheekeyneysaa qisada ku saabsan guurka ay la wadaagtay Cabdullaahi Cabdirahmaan oo u dhashay qoomiyadda Oromada.
Caqabado badan ayaa soo wajaha Dumarka Soomaalida ee Naafada ah, waxaana ugu daran marka ay timaado xiliga guurka.
Waxaa hubaal ah inay riyadooda tahay sidii ay u sameysan lahaayeen lamaane, si loogu mushxarado xiliga aqal galka, balse riyooyinkaas in badan waxaa la taga niyad jabka uga yimaada bulshada inta badan oo u adeegsada hadallo aan munaasib ahayn oo ay kamid yihiin "adoo naafo ah yaa ku guursanaya?".
Nuuriya, waxay tusaale u tahay dadka dhibaatadaas soo arkay.
''Waxaan ahaa saddex jir markii uu igu dhacay xanuunka dabaysha, xilligaasna waxaan ku noolaa magaalada Mandheera ee dalka Kenya, lugaha ayaan ka curyaamay, hooyaday meel walba way i gaysay, mudo yar ka dib waxaa i soo qaaday dhaqaatiir Talyaani ah oo xarun ah ku lahaa magaalada Wajeer, halkaas ayaan ku helay daryeel cafimaad iyo wax barasho. Biro ayaan isticmaali jiray si aan ugu socdo. 14 jir markii aan ahaa ayaan socod billaabay oo birihii iska daayay'', sidaas waxaa BBC-da u sheegtay Nuriya oo ka waramaysay sababta ay naafada ku noqotay.
Ma sahlana marka bulshada aad la nooshahay aad kala kulanto faquuq, Sida ay markhaatiga ka tahay Nuuriya.
Waxay sheegtay in xasuusteeda aysan marnaba ka baxayn dhibaatadii ay la kulantay markii ay ardayadda ahayd.
''Waxaan xasuustaa in maalin walba aan dagaal ku gali jiray Iskuulka, carruurta kale ayaa igu caayi jirtay Jiis Jiis, halka mararka qaar ay i dhaxayn jireen, aniguna kama hari jirin oo waan la dagaallami jiray, waxaase iigu sii darnayd markii macalin iskuulka ii dhigayay uu nagu yiri, waxba ma baran kartaan, naafo ayaad tihiin dadka ha dhibina, iskuulka isaga baxa. Taasi aniga waxay ii ahayd dhiiri galin, waxaana go'aan ku gaaray inaan sii wato waxbarashadeyda", ayey tiri Nuuriya.
Mudo kadib waxbarashadii way u dhamaatay Nuuriya waxayna u wareegtay magaalada Nairobi si ay nolol u samaysato.
Inta badan gabdhihii saaxiibka la ahaa ee aan naafada ahayn waa la wada guursaday, laakiin iyadu waxay isdareensiisay inaan si aad ah loo daneyneynin.
"Anigu waxaan is dhihi jiray wax ku guursanaya malaha iska dhaaf, ragga aad ayaan uga cabsan jiray, waan ka carari jiray, markii dambe ayaan go'aansaday in aan guursado. Qofka haduu xitaa daacad yahay waxaan u maleyn jiray in uu igu ciyaarayo, odaygayga markii aan isguursanaynay wuxuu la tashaday saaxiibkiis, wuxu kula taliyay, 'war hadii aad gabadhan naafada ah guursato hadhow hadii ay uur kuu qaado siday u socon' balse wuu ka diiday oo waanu is guursanay''
Nasiib wanaag Nuuriya waxay heshay nin aad u jecel oo ah Muslim aan Soomaali ahayn, waxay wada qaateen waqti farxad leh.
Nuuriya waxay BBC-da u sheegtay in waqtigan oo ay saddex ciyaal ah haysato ay ninkeeda ka heshay dhiirrigalin iyo farxad aad u badan.
Waxay sidoo kale sheegtay in nolosheeda uusan ku tilmaamin Naafo, si wada jir ahna ay u furteen Dukaan ay kawada shaqeeyaan oo ay noloshadooda ku maareeyaan.
Image caption Cabdullaahi Cabdirahmaan, waa seyga Nuuriya
Waxan sidoo kale la kulanay Seyga Nuuriya Cabdullaahi Cabdirahmaan oo isagana nala wadaagay waayihii ugu adkaa ee ay soo wada mareen xaaskiisa Nuuriya.
''Waxan xasuusanayaa oo aanan iloobi karin, anaga oo dagan guri yar oo Jiingad ah, musqushuna ay naga fog tahay, Nuuriya oo xaamilo ah in ay musqusha ku kuftay, waan hurday dhaawac ayaa igu gaaray intii aan soo badbaadinayay, dhib iyo dheefba waan soo wadaagnay, faxad ayaan ka helay Nuuriya''
Naafanimada ragga iyo dumarku way kala duwan tahay sidaas waxa qaba Haaruun Macalin oo kamid ah dadka naafada ah una dhaqdhaqaaqa xaquuqda naafada.
''Naafanimada raggu way ka duwan tahay tan dumarka, waxay muuqataa oo kaliya marka ninka naafada ah aanu hanti lahayn waa la caayaa, balse haduu hanti leeyahay magaca waa laga badalaa, xaaji, ugaas ayaa loogu wacaa, dhanka kale dumarka arrinkoodu wuu durugsan yahay, raggu waxay aamin san yihiin in dumarku naafada ah aysan, caanaha ariga lisi Karin , cuntada karinta awoodi karin, carruurta hagaajin Karin, xitaa hadii ay hawsha qaban karto ninku ma arkayo, tan ayaa sabab u ah in ay dumarka naafada ah guurku ku yaraado'', ayuu yiri Haaruun.
Dhibaatooyin badan ayaa soo wajaha Soomaalida qabta baahiyaha gaarka ah, arrinkanna kuma baraarug sana dad badan, sidaas awgeedna dad nbadan waxay ku talinayaan in loo baahanyahay in xil layska saaro sidii wacyigalinta loo gaarsiin lahaa bulshada inteeda kale.